Nhau - Stainless simbi firita yezvigadzirwa @ dense skrini kusefa
Iyo firita chinhu chinogadzirwa neasina simbi firita element inogadzira ine akasiyana maficha, uye zvigadzirwa zvakawanda zvinoshandiswa sefaera midhiya. Iyo firita chinhu chinogadzirwa neyechinyakare isina simbi firita chinhu chemugadziri chakagadzirwa newaya mesh; dzimwe nguva pakati pechidzitiro chakavharwa neyakaomarara mesh yekuvandudza simba. Pakutanga, iyo firita chinhu chinogadzirwa neasina simbi firita element mugadziri yaingoshandiswa chete gasi kusefa. Icho chikonzero chisingafungidzirwe chemvura kusefa ndechekuti saizi yeiyo firita chinhu haina kugadzikana uye inozowanda pasi peiyo hombe firita yekumanikidza. Nekudaro, mumakore achangopfuura, tekinoroji yedhivhosi mesh yakasimbiswa firita chinhu yafambira mberi kwazvo. Semuenzaniso, kuitira kugadzirisa kudzikama kwechimiro chesafa chinhu, anotevera matekinoroji anoshandiswa:
Pamusoro pechinhu chesafa chinhu, micro denier fiber inoiswa pamusoro pechosefa. iyo yepamusoro yeiyo inonzwa inobatwa nekutsetseka kupera; uye (3) machira akasimbiswa ari nani uye akasimba anoshandiswa.
Mushure mekutora aya matekinoroji nyowani, chiyero chekushandisa chemafirita chinhu chichawedzerwa. Inogona kushandiswa kwete chete mune yakakwira-inoshanda guruva kubvisa firita, asi zvakare muvhavha yemvura firita (senge dhisiki mhando, dhiramu mhando uye yakatwasuka bhandi mhando yekuzorora firita). Uye zvakare, iyo firita chinhu chinogadzirwa nemugadziri weiyo micro giredhi isina simbi firita yakashandiswa mumudziyo kumanikidza firita kusefa chikafu nemishonga.